खेलकुद – Paluwa Khabar
काठमाडौँ ६ फागुन आज भएको आइ पि एल अक्सनमा साउथ अफ्रिकाका अल राउण्डर क्रिस मोरिस हाल सम्म कै मोटो रकम १६ करोड २५ लाखमा राजस्थान रोएल्सले खरिद गरेको छ। त्यसतै, बंगलादेश टिमका अलराउन्डर शाकिवअल हसन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर)मा जोडिएका छन् । उनी अक्सनबाट आज ३ करोड २० लाख भारुमा केकेआरमा जोडिएका हुन् । यसअघि पनि उनले केकेआरका लागि खेलिसकेका छन् । इंग्ल्याण्डका अलराउन्डर मोइन अली महँगो मूल्यमा चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके)मा जोडिएका छन् । उनी ७ करोड भारुमा सीएसकेमा जोडिएका हुन् । अष्ट्रेलिया टिमका स्टार अलराउन्डर ग्लेन म्याक्सेवललाई रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोर (आरसीबी) अनुबन्ध गरेको छ । उनलाई १४ करोड २५ लाख मूल्यमा अनुबन्ध गरेको हो । म्याक्सेवलले अक्सनमा २ करोड भारु बेस प्राइसका साथ नाम दर्ता गराएका थिए ।
भारतिय मिडियाको खुलासा ,आइपिएल अक्सनमा सन्दिपलाई मोटो रकममा शनराईजर्स हैदरावादले किन्ने
काठमाडौं। यस सिजनको इण्डियन प्रिमियर लिग, आइपिएल क्रिकेटको खेलाडी किनबेच (अक्सन) आज हुँदैछ । चेन्नईमा हिउँसो सवा तीन बजेदेखि अक्सन सुरु हुनेछ । यसपटकको आइपिएल अक्सनमा नेपालबाट सन्दीप लामिछानेमात्रै परेका छन् । ८ खेलाडीले नाम दर्ता गराएपनि अन्तिम सूचीमा सन्दीपमात्रै परेका हुन् । अक्सनको समय आएसँगै सन्दीपको आइपिएल भविष्यका विषयमा नेपाली खेलप्रेमीकाबीचमा निकै चर्चा भइरहेको छ । सबैको चिन्ताको विषय छ, सन्दीपलाई कुनै टिमले अनुबन्ध गर्छ वा गर्दैन । यसअघि दिल्ली क्यापिटल्समा ३ सिजन बिताएका सन्दीपले गएको सिजनमा कुनैपनि खेल खेल्न पाएका थिएनन् । यसपटक दिल्लीले उनलाई रिलिज गरेसँगै नयाँ टिममा अनुबन्धको अवसर सन्दीपले पाएका छन् । तर, उनलाई चुनौती पनि उत्तिकै रहेको छ । अन्य विदेशी खेलाडीको तुलनामा कम मूल्य राखेका सन्दीपको यस सिजनको आधार मूल्य ४० लाख भारतीय रुपैयाँ रहेको छ । यसबीचमा भारती
बर्दिया कात्तिक १५ । यूएईमा जारी १३औं संस्करणको आईपीएल टी-ट्वान्टी क्रिकेटमा राजस्थान रोयल्सले किङ्स इलाभेन पन्जाबलाई पराजित गरेको छ । आबुधाबीमा शुक्रबार राति भएको खेलमा राजस्थानले पन्जाबलाई ७ विकेटले पराजित गरेको हो । पन्जाबले दिएको १८५ रनको लक्ष्य राजस्थानले १७ ओभरमै भेटेको हो । विशाल लक्ष्यलाई राजस्थानले १७ ओभर ३ बल खर्चिदा ३ विकेट मात्र गुमाएको थियो ।​ राजस्थानका लागि बेन स्टोक्सले सर्वाधिक ५० रन बनाए । सन्जु सामसन ४८, रोबिन उथप्पाले ३० रन बनाउँदा कप्तान स्टिभ स्मिथ ३१ र जोस बट्लर २२ रनमा अविजित रहे । पहिलो ब्याटिङको निम्तो पाएको पन्जाबले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १८५ रन बनाएको थियो । राजस्थान विजयी हुँदा पन्जाबका लागि क्रिस गेलले बनाएको ९९ रन खेर गयो । शतक बनाउन एक रनले चुकेका गेलले ६३ बलमा ८ छक्का र ६ चौका हानेका थिए । शतक नपुग्दै विकेट झरेपछि उनले मैदानमै ब्याट फालेका थिए। पञ
काठमाडौँ, कात्तिक १२ । युइएफए च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत रियल म्याड्रिड बराबरीमा रोकिएको छ । गएराति मोन्चेंग्लावाचको घरेलु मैदानमा सम्पन्न खेलमा दुबै टिमले २-२ गोलको बराबरी खेल्दै ‘समूह बी’मा अंक बाँडेका हुन् । मोन्चेंग्लावाचका लागि खेलको ३३ र ५८ औं मिनेटमा मार्कुस थुरामले गोल गरे । पहिलो खेलमा हार बेहोरेको रियल दोस्रो खेलमा संघर्षपूर्ण बराबरीमा रोकिएको छ । रियलले अब च्याम्पियन्स लिगको अर्को खेल इन्टर मिलानविरुद्ध खेल्ने छ ।यस्तै रियललाई बराबरीमा ल्याउन ८७ औं मिनेटमा करिम बेन्जेमा र इन्जुरी समयमा कासेमेइरोले गोल गरे ।
रूकुम ब्यटमेटन्टन प्रतियाेगिता सम्पन्न
मनाेज डाँगी रूकुम कार्तिक ८ । रुकुम ‘पश्चिम’ सानीभेरी गाउँपालिका स्थित सिम्लीमा सोहि गाउँपालिका ११ का समाजसेवी ऋषिराम खड्काको मुख्य प्रायोजन र स्थानीय ब्यापारीहरुको सहयोगमा गत असोज ५ गतेदेखि संचालित जिल्ला स्तरिय पुरुष डबल ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आज सम्पन्न भएको छ । प्रतियोगितामा आयोजक टिम हेमन्त रोकाय र कविन्द्र पुनको जोडीले पहिलो स्थान हाँसिल गर्यो भने अर्को आयोजक टिम भागिराम भण्डारी र भिमसेन केसीको जोडिले दोस्रो स्थान हात पारेको हो । नकआउट सिस्टममा खेलाइएको खेलमा जिल्ला ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष अनिल बुढामगर र उपाध्यक्ष ध्रुवविक्रम थापाको जोडी र लोकेन्द्र केसी र लोकेन्द्र बुढामगरको जोडी दुई टिम सान्त्वना भएका छन् । प्रतियोगिताको समापनमा प्रमुख अतिथि समाजसेवी ऋषिराम खड्काले खेलाडीहरु पहिलो हुने जोडिलाई २० हजार नगद, दोस्रोलाई १५ हजार र सान्त्वना हुने दुई जोडीलाई ५ र ५ हजार नगद र प्रमाण
मुम्बईकाेे अगाडि चेन्नईकाे लज्जास्पद हार
बर्दिया कार्तिक ८ । अहिले सञ्चालन भई रहेकाे इण्डिय प्रिमियर लिग (आईपीएल)को शुक्रबारकाे खेलमा मुम्बई इन्डियन्स बिजयी हासिल गरेकाे छ । शारजाह क्रिकेट स्टेडियममा भएको खेलमा चेन्नई सुपर किंग्सलाई १० विकेटले पराजित गर्दै मुम्बईले जित हासिल गरेकाे हो । आईपीएल लिगको ४१ औं खेल अन्तर्गत भएको आजको खेलमा बिजयी भएको मुम्बईले आफूलाई अंक तालिकाको शिर्ष स्थानमा पनि पुर्याएको छ । टस हारेर ब्याटिङ थालेको चेन्नईले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै १ सय १४ रन बनाउन सफल भएको थियो । चेन्नईका ब्याट्सम्यान साम करनले ४७ बलमा ४ चौका र २ छक्का सहित सर्वाधिक ५२ रनको योगदान दिएका थिए । त्यस्तै इमरान ताहिर १० बलमा २ चौका सहित १३ रनमा अविजित रहे । त्यसपछि मुम्बाईले जितको लागि १ सय १५ रनको लक्ष्य पाएको थियो । जसलाई मुम्बईले १२.२ ओभरमा बिनाविकेटको क्षतिमा सजिलोसँग पूरा गरेको थियो । उसकालागि जितमा ईशान किशनले ३७ बलमा ६ चौका र
खुला ब्याटमेन्टन प्रतियाेगितमा कसले जिते पुरस्कार
बर्दिया कार्तिक ६ गते । कृष्णसार युथ स्पोर्टस कलब गुलरिया को आयोजनामा कार्तिक १ गते देखी कार्तिक ७ गते सम्म सन्चालन भएको अन्तर नगर खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता गुलरियामा सम्पन्न भयकाे छ । सम्पन्न खेलहरु मा एकल तर्फ प्रथम गुलरिया ७ का अनुपम न्यौपाने भयका छन भने दितियपुरस्कार जित्न प्रेन खत्री सफल भयका छन । त्यसै गरि प्रतियाेगिताकाे खुल्ला डबल तर्फ राजेश चौधरी र लीलामणी थापा को जोडि प्रथम भएको छ भने अनुपम् न्यौपाने र केशब गौतम को जोडि दित्तिय भएको छ ! एक सता सम्म गुलरियामा सञ्चालन गरिएकाे खेलमा सुपर भेट्रान तर्फ को खेेेेलमा मा युबराज श्रेष्ठ र राजेन्द्र घिमिरे को जोडी प्रथम भयकाे छ साे टिमले ले बाल कृष्ण वली र तूलु मल्ल ठकुरी सँग प्रतिस्पर्धा गरेकाे थियाे । प्रतियाेगितामा बिजयी खेलाडीहरु लाई गुलरिया नगरपालिका का प्रतिनिधि एव कृष्णसार युथ स्पोर्टस कलब का अध्यछ युबराज श्रेष्ठले पुरस्कार बित
काठमाडौं, १ कात्तिक : यूएईमा जारी १३ औँ सिजनको आईपीएलमा आज हुने दोस्रो खेलमा चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) र दिल्ली क्यापिटल्स खेल्दै छन् । यी दुई टिमबीचको खेल साँझ ७ः४५ बजेदेखि शारजाहमा सुरु हुनेछ ।जारी सिजनमा दिल्लीले ८ म्याच खेल्दा ६ म्याचमा जित हासिल गर्दै १२ अंक जोडिसकेको छ । र, दिल्ली आज विजयी भएमा फेरि दोस्रोबाट शीर्ष स्थानमा उक्लिने छ । सीएसकेले भने ८ म्याचमा तीन खेलमा जित हासिल गरेको छ । गत सिजन उपविजेता सीएसकेले तालिकामा ६ अंक जोडेको छ ।सीएसके र दिल्लीबीच भएका पछिल्ला पाँच म्याचमा दिल्ली २ खेलमा विजयी भएको छ । जारी सिजनमा पनि दुबै टिममा गत सिजनकै कप्तान छन् । दिल्लीमा श्रेयस अय्यर र सीएसकेमा महेन्द्रसिंह धोनी कप्तान रहेको छन् । सीएसकेविरुद्ध सन्दीपको सम्भावना लगातार आठ म्याचमा बेन्चमा बसिररहेका नेपाली लेगस्पिनर सन्दीप लामिछानेले आज पनि प्लेइङ-११ मा मौका पाउने सम्भावना न्यून छ
आईपिएलको बिचमा दिल्ली टिम छोडेर कोलकत्तामा जाँदैछन् सन्दिप लामिछाने ? यस्तो छ भित्री कुरा
Posted in खेलकुद, शिक्षा
एजेन्सी । आईपीएल २०२० को मिड सिजन लगभग समाप्त हुँदै छ । सबै सहभागी टोलीले समान ७-७ खेल खेलेपछि आईपीएलको मिड सिजन ट्रान्सफर विन्डोज खुला हुनेछ । मिड सिजन ट्रान्सफर विन्डोजका दौरान खेलाडी एक टोलीबाट अर्को जान सक्नेछन् । जुन खेलाडीले अहिलेसम्म आफ्नो टिमको प्लेइङ एघारमा स्थान बनाउन सकेका छैनन् र पछिल्लो बाँकी आठ खेलमा पनि स्थान बनाउने सम्भावना कम भएका खेलाडी यस मिड सिजन ट्रान्सफर विन्डोजमा अर्को टिममा जान सक्नेछन् । त्यस्तै अहिलेसम्मको खेलमा आफ्नो टोलीको कम्बिनेसन बनाउन नसकेको टिमले पनि मिड सिजन ट्रान्सफर विन्डोजको माध्यमबाट खेलाडी अनुबन्ध गर्न सक्नेछन् । यस सिजन केही टिमको कम्बिनेसन राम्रो छ । तर, केही टिम यस्ता छन् कि यस सिजनको मिड सिजन ट्रान्सफर विन्डोज खेलाडी अनुबन्ध गर्न निकै आवश्‍यक छ । नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले पनि यस सिजनको आईपीएलमा कुनै खेल खेल्ने अवसर पाएका छैनन् । दिल्
राजस्थानविरुद्ध आज सन्दीपले मौका पाउने प्रबल सम्भवना
Posted in खेलकुद, शिक्षा, समाचार
काठमाडौं, २८ असोज : आईपीएलको १३ औँ सिजन अन्तएगत आज दिल्ली क्यापिटल्स र राजस्थान रोयल्स खेल्दै छन् । दिल्ली र राजस्थानबीचको खेल साँझ ७ः४५ बजेदेखि सुरु दुबईमा सुरु हुनेछ । दुबै टिमको यो आठौँ म्याच हो । दिल्लीले सात खेलमा २ मा हार र ५ खेलमा जित हासिल गरेको छ । राजस्थानले ७ मध्ये तीनमा जित र चार खेलमा हारको सामना गरेको छ । जारी आईपीएलमा दिल्ली राम्रो लयमा देखिएको छ । यद्यपि पछिल्लो समयमा टिमका महत्वपूर्ण सदस्य घाइते भएपछि दिल्लीलाई केही असर पर्ने देखिन्छ । टिमका स्टार स्पिनर अमित मिश्रा र वीत्र गतिका बलर इशान्त शर्मा चोटका कारण लिगबाटै बाहिरिएका छन् । साथै, टिमका अर्का महत्वपूर्ण सदस्य ऋषभ पन्त पनि घाइते छन् । यी खेलाडीको अनुपस्थितिमा दिल्लीले लय गुमाउने सम्भावना पनि छ । मुम्बईविरुद्ध दिल्लीले हार ब्यहोरेकाले आजको खेलमा दिल्लीको अन्तिम-११ मा केही परिवर्तन देख्न पाइने सम्भावना छ । म
एक्कासी फेरी लकडाउन हुने मिती तोकियो, यति गतेबाट पुन देशमा लकडाउन सुरू हुँदै (509)
शिक्षकले राजनीति गरे जागिरै चट् पार्ने गरि यस्तो बन्यो कानून , पढ्नुहोस कानुन? (338)
आजदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, कस्को कति तलब वृद्धि ? (323)
मास्टर माइन्ड प्रचण्डलाई देउवाले दिए सरकारको सबै जिम्मा, माओवादीबाट नयाँ राष्ट्रपति को ? (321)
माओवादी केन्द्रमा भुइँचालो , सोह्र सांसद एमालेमा प्रवेश ! नामावली सहित (319)
भर्खरै बिमान दु’ र्घटना हुँदा प्रधानमन्त्री सहित ११ जनाको मु’ त्यु , मनमा माया भए RIP लेख्नुहोला (309)
अब बालबालिकालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ शैक्षिक भत्ता, यसरी प्राप्त गर्नुहोस्? (269)
पर्यटनमन्त्रीमा प्रेम आले (261)
ससुरालीबाट टिका थापेर घर फर्कने क्रममा ल’डेर लेखबहादुरको मृ’त्यु
कैलालीमा मोटरसाइकल दुर्घट’ना हुँदा चालकको मृ’त्यु
साफ फुटबल : उपाधिका लागि नेपाल र भारत खेल्दै हेर्नुहोस।
दोहोरी च्याम्पियनमा गाउँदा गाउँदै बाबाको निध’नको खबरले धुरुधुरु रोइ’न गायिका डिला बिक,राजुकोनि उस्तै पि’डा (भिडियो कुराकानी)
१.	नेपालगञ्‍जबाट मुगु जाँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा २२ को मृ’त्यु (40)
२.	खसी काट्ने बिबादमा बुवाले आफ्नै छोराको घाँटी का’टे (37)
३.	आधा घण्टा अघि यस्तो तस्बिर राखेकी डा. दीपाको भयो दु’खद् नि’धन (भिडियो हेर्नुस्) (32)
४.	राजा ज्ञानेन्द्रलाई भट्टराईको धम्की : देशको आलिकती माया भए चुप लागेर गणतन्त्र स्वीकार्नु ( सहि वा गलत ) (30)
५.	सांसदको दसैँ भत्ता काटिएपछि रामनारायण बिडारीको आक्रोश : के सबै सांसद विनोद चौधरी हुन् ? (30)
६.	हार्दिक श्रदान्जलि ट्याक्टर दु’र्घटना,एमाले जिल्ला अध्यक्षका छोराको मृ’त्यु (30)
७.	तपाईको आजको दिन कस्तो ?आज २७गतेको भाग्य फल हेरि दिनको शुरूवात गरौ । (27)
८.	यी नै हुन्, चालक जसले ब्रेकफेल भएको बसलाई उकालोमा हालेर ४० जनाको ज्या’न” जोगाए ! (27)